Semalt: Google Analytics Filters izay hanatsara ny fahombiazan'ny site
Maro ny fomba hanatsarana ny fampisehoana ao amin'ny Google Analytics, ary ampahany amin'ny marketing digitale. Raha te hampiseho ny tatitra momba ny fivoarana mivaingana na ny famaritana ny antony mahatonga ny fifamoivoizana, dia mila mandinika ny habetsaky ny fahitan'ny tranonkala ny tranonkala. Ny data momba ny Google Analytics dia tokony ho marina sy hivoatra - asphalt fabric bethesda. Soa ihany, ny Google Analytics dia nahasarika ny filaharambe izay manan-danja ho an'ny tranonkala.
Alohan'ny hiresahana ireo sivana ireo, Oliver King, Mpanantanteraka Success Manager Semalt , dia manolotra soso-kevitra hitazona ny tatitra iray tsy misy filamatra na ny fijerena ny anaran'ny sehatra rehetra ao amin'ny Google Analytics.
Manafoana ny fifamoivoizana anatiny
Tsy azo ampiharina amin'ny karazan-tranonkala rehetra izy, fa ny orinasa goavambe ihany no mahazo tombony amin'izany. Ho an'ny fandraharahana madinika, zava-dehibe ny manilika ny fifamoivoizana anatiny mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny fifamoivoizan'ny tranonkala. Tokony hanana antoka izy ireo fa hahazo ny kalitaon'ny habaka ny tranonkalany ary mifandray amin'ny pejy web-ny ireo olona tena izy. Ho an'ity, tokony hanangana fomba fijery vaovao ianao ao amin'ny kaonty Google Analytics izay mety hanaisotra ny fifamoivoizana anatiny amin'ny ankapobeny. Tokony hanaisotra ny adiresy IP manokana ihany koa ianao mba tsy hiantefa amin'ny tranokalanao ny fomba fijerinao sy ity. Raha te hanilika adiresy IP be dia be ianao, dia tokony hampiasa ordinatera manokana izay mora mamorona sy manana karazan-javatra maro.
Tsy mety ny milaza fa ny tranonkala dia nanimba vohikala maromaro tao anatin'ny volana vitsivitsy. Izany no antony tokony handraisanao ny sainam-potoana hanesorana vahaolana amin'ny famerenana azy. Tokony esorinao daholo ny tranonkala rehetra na ny referrer izay manomboka amin'ny Darodar, bokotra-for-tranonkala, ary ny SEO-tolotra tsara indrindra. Eto ianao dia tsy mahavidy hanao fahadisoana; Tokony hamaritra ny meloka ianao ary hanala ny spam referans ary miditra ny sehatra misy anao amin'ny sehatra samihafa.
Asehoy ny anaran'ny mpampiantrano sy ny URL feno
Raha ny votoatiny, Google Analytics dia tsy mampiseho ny adiresy manontolo ao amin'ny pejiny ao amin'ny tatitra. Noho izany, raha ny tranonkalanao dia www.abc.com, tokony ho hita ny pejy manan-danja ao amin'ny Google Analytics, ary izany dia azo atao amin'ny fampisehoana anaran-drakitra na URL feno. Azonao atao koa ny mamorona votoaty miaina ary mamorona filtre hafa ho an'ny sehatra samihafa. Tsy miteraka fifanjevoana izany rehefa manana pejy marobe marobe hikarakarana ianao. Ny pejy rehetra amin'ny subdomain dia tokony ho afaka amin'ny fahadisoana alohan'ny hamoahana azy.
Fikirakirana ny fifamoivoizana amin'ny faritra iray
Raha te hiresaka momba ny subdomains ianao, dia tsy maintsy manavaka ny fifamoivoizana avy any amin'ny sehatra lehibe ao amin'ny Google Analytics. Ataovy azo antoka fa mampiasa ny toetra amam-pitaovan'ny UA na ny code toy ny tranokalanao maina ny subdomains anao. Afaka manao ity asa ity ianao amin'ny fitsidihana ny sehatry ny sehatra misimisy ao amin'ny Google Analytics.
Vonoino ny URL rehetra
Farany fa tsy ny kely indrindra, te-hiresaka momba ny atin'ny ambany kokoa URL. Sarotra ho an'ny webmasters maro, saingy manana tombony be izy. Azonao atao ny mikirakira ny URL hafa ary mahazo traikefa be dia be ao amin'ny AdSense anao. Zava-dehibe ny hanamafy ny rakitra ary hampihatra ny filaharam-pamokarana izay mety hampidina ny URL rehetra rehetra.